Uyisebenzisa kanjani iApple Diagnostics kwiiMacs ezithengiswe ukusukela ngoJuni 2013 ukubheka phambili | Ndisuka mac
KuLwesihlanu odlulileyo sisungule okokuqala kwezi zifundo zimbini I-Apple ngokwayo isibonisa ukuba sikwazi ukufumanisa izixhobo zeMac kwaye namhlanje ngoMvulo similisela isavenge sesibini sesi sifundo yabo basebenzisi abaneMac ukusukela ngoJuni 2013 ukubheka phambili.
Kule meko igama liyatshintsha kula maqela kwaye ngelixa iimodeli zikaJuni 2013 zibuyela umva olu vavanyo lubizwa Uvavanyo lwe-Apple Hardware (AHT) kwiinguqulelo zamva nje Oku kubizwa Uxilongo lweApple (AD). Ngokwenyani inkqubo iyafana kakhulu kwaye batshintsha nje amanyathelo athile apho siza kuba nokukhetha ukubona ibha yenkqubela phambili okanye ukukhetha ukuqala uvavanyo kwakhona.
I-Apple Diagnostics ijonga iingxaki zehardware kwi-Mac yethu, kodwa olu hlobo lovavanyo akufuneki lwenziwe ukuba izixhobo zethu zisebenza kakuhle. Ngayiphi na imeko, kubalulekile ukuthi iingxaki zehardware zihlala zichongwa yiApple ngaphambi kokuba abasebenzisi babe nazo kwaye kulula ukufumana iinkqubo zokubuyisela okanye zokulungisa ezisebenzayo ukuzisombulula.
1 Uyisebenzisa njani iApple Diagnostics
2 Ulwazi ekufuneka luthathelwe ingqalelo
Uyisebenzisa njani iApple Diagnostics
Cima zonke izixhobo zangaphandle ngaphandle kwebhodibhodi, imouse, ukubonisa, uqhagamshelo lwe-Ethernet, kunye nonxibelelwano kwivenkile yamandla
Qiniseka ukuba iMac ikwindawo enzima, ethe tyaba, ezinzileyo, kunye nomoya ophume kakuhle, kwaye ucime iMac yakho.
Layita iMac kwaye kwangoko emva koko kufuneka sibambe iqhosha le-D njengakwinguqulelo yangaphambi kukaJuni 2013. Sibambelela kude kuvele isikrini apho unokukhetha khona ulwimi. Xa ukhethe ulwimi, iApple Diagnostics iya kubonisa ibha yenkqubela phambili.
Ukutshekishwa kweMac kuthatha imizuzu emi-2 ukuya kwemi-3. Ukuba kukho naziphi na iimpazamo ezifumanekayo, iApple Diagnostics iphakamisa izisombululo kwaye ibonelela ngeekhowudi zesalathiso. Bhala iikhowudi zesalathiso ngaphambi kokuqhubeka.
Khetha enye yezi ndlela:
Ukuphinda uvavanyo, cofa "Qhuba uvavanyo kwakhona" kwaye ucofe u-Command (⌘) -R.
Ngolwazi oluthe kratya, njengeenkcukacha zenkonzo kunye neenketho onokuzifumana, cofa u "Qalisa" okanye ucofe u-Command-G.
Ukuqala kwakhona iMac yakho, cofa uQalele okanye ucofe u-R
Ukuyicima, cofa u-Shut Down okanye ucofe u-S.
Ukuba ukhetha ukufumana ulwazi oluthe kratya, iMac yakho iya kuqala kwi-MacOS Recovery kwaye iya kubonisa iphepha lewebhu apho uya kucelwa ukuba ukhethe ilizwe lakho okanye ingingqi. Cofa "Vuma ukuthumela" ukungenisa inombolo yakho yeenombolo kunye neekhowudi zokudlulisela kwiApple. Emva koko landela inkonzo kunye nemiyalelo yenkxaso kwiscreen. Xa ugqibile, unokukhetha ukuqala kwakhona okanye ukuvala phantsi kwimenyu ye-Apple. Kule nyathelo ufuna uqhagamshelo lwe-Intanethi. Ukuba awuxhunyiwe kwi-Intanethi, iphepha liza kuvela likuxelele ukuba uqhagamshele njani.
Ulwazi ekufuneka luthathelwe ingqalelo
Ukuba ukubamba iqhosha le-D ngexesha lokuqalisa akuqali i-Apple Diagnostics:
Ukuba usebenzisa iphasiwedi ye-firmware, khubaza. Ungayibuyisela emva emva kokusebenzisa i-Apple Diagnostics.
Gcina amaqhosha okhetho-D xa uqala ukuqala ukuzama ukuqala iApple Diagnostics kwi-Intanethi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Mac OS X » Uyisebenzisa kanjani iApple Diagnostics kwiiMacs ezithengiswe ngoJuni 2013 ukubheka phambili